Ny siligaoma Bases
Product Name: Soy proteinina Mitokana
Hifantoka Soya proteinina vita avy any NON-GMO soybean.
Q1: aho liana amin'ny vokatra, fa ankehitriny aho avy any Shina, azonao manolotra ny etikety amin'ny tanin-drazako?
Q2: Ahoana no mahazo ny santionany?
Q3: Azo atao ve ny fanao ny marika miaraka amin'ny famolavolana manokana?
Q4: Ahoana no halefako ho anareo ny fandoavam-bola?